श्रीमान अफिस गएको बेला श्रीमतीले घरमै परपुरुषसँग मस्ती गर्दा…. – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/श्रीमान अफिस गएको बेला श्रीमतीले घरमै परपुरुषसँग मस्ती गर्दा….
जब श्रीमानलाई ढोकामा देखे ति पुरुष हतार हतार भा ग्ने क्रममा भवनको पाचौं तल्लाबाट हाम फाले । उनलाई घा’इते अवस्थामा अस्पताल लगिएको थियो । तर अस्पतालमा लगिएपनि उनको ज्यान भने जोगिएन । श्रीमानले रंगेहात देखेपछि देह त्या’ग गर्ने प्रयास गरेकी श्रीमती भने जोगाइएको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **